Jawiga Navbar wuxuu keenayaa xaalada cimilada barta hagista | Androidsis
In kasta oo ay u muuqato in xawaaraha dahabiga ah ee barnaamijyadu mar hore dhaafeen, haddana weli waxaa jira horumariyayaal billaaba noocyada qaarkood Navbar Weather, waa codsi ku siinaya adiga saadaasha hawada ka bar bar laftiisa on your mobile Android.
Marka waxaan sii wadaynaa inaan layaabno xariifnimada iyo rabitaanka horumariyayaal badan si aan u kala qaadno barnaamijyada ugu awoodda badan dhammaan qaybaha jira. Navbar Weather ayaa tan ku tijaabisa macluumaad taas ku saabsan waxay ka bixisaa barta baarista taas oo aan badiyaa ka helno badhanka dambe, guriga iyo barnaamijyadi ugu dambeeyay.
1 Macluumaadka hawadda ilbidhiqsiyo gudahood
2 Navbar habeynta hawada
3 App ah nooc isticmaale ah
Macluumaadka hawadda ilbidhiqsiyo gudahood
Keenista saadaasha cimilada barta baarista ayaa fikrad weyn u ah dhammaan isticmaaleyaasha doonaya inay adeegsadaan goobtaas si ay u soo bandhigaan macluumaad qiimo leh. Taasi waa, waxaad u baahan doontaa oo keliya inaad shiddo shaashadda mobilkaaga Android iyo eeg sida xogta kaladuwan ay ugu muuqaneyso si isdaba joog ah taas ayaa ina daneyneysa inaan ogaanno xaaladda cimilada hadda jirta.
Oo intii ay u muuqan karto taas waxaan u baahanahay mudnaanta xididka Si aad u rakibto oo aad u isticmaasho Navbar Weather, waxba, waa inaad kaliya ka rakibtaa Google Play Store si bilaash ah si aad u hesho garaafyadaan kala duwan ee qaar ka mid ah qiimayaasha saadaasha hawada ee na daneynaya.
Qiimayaashaasi waa heer-kulka, cadaadiska Hawada, xaaladda daruuraha, xawaaraha dabaysha iyo mugga roobka. Mid kasta oo ka mid ahs way is raaci doonaan muddo u dhexeysa 15 ilbidhiqsi si aan u ogaan karno cimilada meesha taal oo aan markaa go'aansanno haddii ay ahaan lahayd fikrad wanaagsan in la aado qubayska barkadda ama aan baaskiil la raacno saaxiibbada.
Navbar habeynta hawada
Tani waa mid ka mid ah guulaheeda ugu waa weyn, tan iyo markii aan heli doonno ikhtiyaar aan ku qaabeyno qaar ka mid ah qodobbada ugu muhiimsan ee Navbar Weather. Hore ayaan uga faallaynay taas, labadaba barta baarista iyo barnaamijka furan laftiisa, waxaan ka heli karnaa qiimayaasha waqtigaas. Waxaan sidoo kale awoodnaa ogow saadaasha maalmaha soo socda, iyo sidoo kale shakhsiyeynta khibrada isticmaale ee ay bixiso Navbar Weather.
Waxaan ka hadleynaa waxa waxaan u habeyn karnaa taxane taxane ah si loo hagaajiyo khibrada:
Isbeddel inta u dhexeysa 5 maalmood iyo 3 saacadood Saadaasha: markaad dhaqaajiso doorashadan waxaad arki doontaa garaaf leh 5 maalmood oo ah saadaasha hawada oo ay ku jiraan xog 3dii saacadoodba mar.
Xaddid xogta garaafka: waxaad ku xadidi kartaa 24 saacadood, 48 saacadood oo aan la koobi karayn.
Xulo nooca bandhigga garaafyada: waad ku badali kartaa inta udhaxeysa baararka ama garaafka.
Tani waxay tusaale u tahay wax kasta oo aad sameyn kartid, maadaama aad xitaa furi kartid xogtaas aanad u arkin inay lagama maarmaan u yihiin adiga oo ku haya indhahaaga, ama xitaa gab daaqada Navbar bar-tilmaameedka. Waad joojin kartaa isku xigxiga garaafyada kaladuwan, maxaa yeelay asal ahaan waa la beddelaa 15-kii ilbiriqsiba.
App ah nooc isticmaale ah
Dhammaan xulashooyinka kale ee Hawada Navbar ayaa taga tan iyo markii isbedelka qaabka cutubka si loo doorto darajooyinka centigrade si loo beddelo ilaha xogta ay bixiso barnaamijkan cusub ee lagu sii daayay Google Play Store.
Maaha inay tahay barnaamijka ugu fiican ee leh dhammaan noocyada cuntooyinka, xulashooyinka iyo astaamaha, laakiin sida saadaashu tahay inaad si toos ah ugu qaaddo bar-tilmaameedka mobilkaaga Android waa guul. Waxaan u qaabeyn karnaa Navbar Weather si ay kaliya u muujiso heerkulka, inay u sameyso muuqaal ahaan baararka ama ay si fudud u muujiso sawir aruurinaya cimilada hadda jirta.
Waa iswaafajinta kuwan oo ah soo jiidashada weyn ee abka loo yaqaan Navbar Cimilada inaad ku haysatid bilaash Google Play Store. Mid ka mid ah cilladaha ay leedahay ayaa ah inaysan ku jirin Isbaanishka, in kasta oo waxa garaafkeedu yahay, sida heerkulka, ay u shaqeyso si fiican xitaa haddii aanan si fiican ula heshiin Ingiriiska. Waxaan wajahaynaa nuuciisii ​​ugu horreeyay, markaa waa arrin waqti ku xiran.
Cimilada Navbar: Saadaasha Navigation
Developer: Barnaamijyada Pesta
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Ka soo gal saadaasha hawada barta bareegaha ee mobilkaaga Android iyadoo la socota Navbar Weather